Infographic: torolàlana amin'ny famahana ny olana amin'ny famoahana ny mailaka | Martech Zone
Rehefa mandefa mailaka ianao dia mety hiteraka korontana be. Zava-dehibe ny hahatongavana any amin'ny farany ambany - haingana!
Ny zavatra voalohany tokony hatombontsika dia ny fahazoana ny fahalalana ny singa rehetra miditra amin'ny fampidirana ny mailakao amin'ny boaty… dia ao anatin'izany ny fahadiovan'ny data, ny lazan'ny IP, ny fikirakirana DNS (SPF sy DKIM), ny atiny ary izay rehetra mitory amin'ny mailakao toy ny spam.
Ity misy infographic manome topy topy maso ny fandehan'ny mailaka hatramin'ny famoronana ka hatramin'ny boaty. Ireo zavatra asongadina dia inona no fiantraikan'ny mety hisian'ny mailaka alefa any amin'ny boaty fisoratana anarana:
Olana amin'ny famahana olana
Hamarino tsara fa afaka mamaha olana sy manamboatra olana amin'ny fandefasana mailaka haingana sy haingana ianao, ity misy torolàlana iray mivantana tsikelikely amin'ny olan'ny famahana olana.
Dingana 1: avereno jerena ireo rakitra fisoratra mailakao na data momba ny kaody bounce
Zahao ny angon-drakitra momba ny mpanjifa mailaka izay voadona indrindra. Jereo ao amin'ny kaody bouncing ary jereo raha manomboka amin'ny Kaody bouncing 550. Raha izany, a sivana spam ny olanao. Ny fangatahana ireo mpandray ampiana ny adiresy mailaka amin'ireo mpifanerasera aminy dia mety hamaha izany. Raha tsy azo atao dia mandehana amin'ny dingana manaraka.
Dingana 2: Zahao ny SPF, DKIM, ary ny DMARC Configuration, ny DNS setting, ary ny politikanao
Ity no dingana manaraka ataonao na mahita kaody bouncing 550 ianao na tsia. Misy rindrambaiko isan-karazany manampy anao hamita ity dingana ity:
Rehefa tsy napetraka tsara ireo fepetra ireo dia mety hiteraka olana amin'ny fandefasana mailaka. Ho fanampin'izany, azonao atao ny manamarina ireo toe-javatra ireo amin'ny alàlan'ny famakiana amin'ny alàlan'ny angon-drakitra lohateny lozisialy - matetika dia asehon'izy ireo anao na tsia ny mpandova nandalo ireo fanamarinana ireo.
Dingana 3: Zahao ny naoty IP Reputation / Sender anao
Raha mitohy ny olana dia mety misy ny olana amin'ny Adiresin'ny IP na isa mpandefa. Làlana miverina (Ananan'ny Validity ankehitriny) rindrambaiko mamela anao hanamarina ny isa ny mpandefa ny IP. Raha tsy mifanaraka ny isa dia hanome anao fahitana ny anton'ny olana. Ity rindrambaiko ity dia afaka manampy anao hamantatra fomba hanatsarana ny fandrosoana.
Dingana 4: Zahao raha Blacklisted ny adiresy IP anao
Misy serivisy ankolafy fahatelo izay samy manamarina ny ISP sy ny mpizara fifanakalozana mailaka hahitana raha tokony handefa ny mailakao amin'ny boatin-kevitry ny mpanjifany izy ireo na tsia. Spamhaus dia mpitarika ao amin'ity indostria ity. Raha afaka manome làlana fanaraha-maso ianao fa manana fifandraisana amin'ny orinasa izay nitory anao ho SPAM na firaketana opt-in, matetika dia hanala anao amin'ny lisitra mainty izy ireo.
Dingana 5: Zahao ny atiny
Ireo mpamatsy serivisy amin'ny Internet sy ny mpanjifan'ny mailaka dia mijery ireo teny ao amin'ny mailakao hahafantarana ny mety ho SPAM. Ny filazanao fotsiny hoe "Maimaimpoana" amin'ny andalana foto-kevitra na imbetsaka mandritra ny atiny dia afaka alefa mivantana amin'ny mailaka Junk ny mailakao. Ny ankamaroan'ny mpanome tolotra mailaka dia hanampy anao handoka ny atiny sy hanala ireo teny mety hahatonga anao hanana olana.
Dingana 6: Mifandraisa amin'ny mpamatsy tolotra Internet an'ny mpanjifa
Raha tsy ny isa ny mpandefa dia mety ilaina ny mifandray amin'ny mpanjifa mailaka hitanao tamin'ny dingana voalohany. Ny olana amin'ny fandefasana dia mety hitranga amin'ireo mpamatsy lehibe toa ny Gmail, Microsoft, BigPond, ary Optus. Na izany aza, raha hitanao fa adiresy mailaka an'ny governemanta ny mpanjifa dia tsara kokoa ny tsy miraharaha ilay olana satria tsy azo atao ny mifandray mivantana amin'ny vatana misahana azy.
Angataho ireo mpamatsy serivisy mpanjifa mailaka (Microsoft, Google, Telstra, Optus) hametraka lisitra fotsy amin'ny adiresy IP. Izany dia tokony hisorohana ny olana tsy hitranga intsony. Alao antoka fa marina ny SPF, DKIM, ary DMARC alohan'ny hifandraisanao amin'ireo mpanome tolotra - io no fanontaniany voalohany. Mila manaporofo ianao fa napetraka tsara ireo fepetra ireo alohan'ny hahafahan'izy ireo mihetsika na inona na inona.
NAOTY: Ny Folder Junk dia Nafahana
Ataovy ao an-tsaina fa ny fitrohana dia midika fa ny serivisy mpandray dia nandà ny mailaka ary namaly an'io kaody io. Mailaka atolotra (Kaody 250 ok) mbola azo alefa any a Folder Junk… Zavatra mbola tokony halaminao. Raha mandefa olona ana hetsiny… na hafatra an-tapitrisany ianao, dia mbola te hampiasa an fitaovana fametrahana inbox hamaha raha sendra mankany amin'ny boaty inbox na ny junk folder ny mailakao.
Ny fiasa amin'ireo dingana ireo dia tokony hahafahanao mamaha ny ankamaroan'ny mailaka mandefa olana tsy misy fahasarotana. Na izany aza, raha nahavita ireo dingana ireo ianao saingy mijanona ny olana dia efa akaiky ny fanampiana - mifanerasera amin'ny ekipanay raha mila fanampiana.
Miorina amin'ny torolàlana tsikelikely etsy ambony, nanampy ny mpanjifa marobe izahay hamaha ny olan'ny fitaterana azy ireo. Ohatra, ho an'ny iray amin'ireo banky orinasa aostralianina, dia narahinay ireo dingana etsy ambony mba hampitomboana ny fahafaha-mivoaka 80% ka hatramin'ny 95% ao anatin'ny 2 volana.
Tags: 250okFipoahana 550lisitra maintymandefa mailakaClickfanateranadkimDMARCmailaka mailakainfographic mailaka fanateranabouncing mafyny fomba fiasan'ny mailakamariho ho fakomariho fa tsy fakotatitra spamSpamhausspffamahana olana amin'ny fandefasana mailakaUnsubscribe